Goverana zvekutenga: nei vachiita miviri? | Ehupfumi Zvemari
Goverana zvekutenga: nei vachiita miviri?
Kudzoka kwezvikamu zano iro makambani akanyorwa pamisika yemari anoita neimwe frequency. Yakave ichionekwa mumazuva achangopfuura nechimwe chezvinhu zvinonyanya kushanda pamusika weSpanish wemusika. Nekuti zvazviri, nepo musika wemasheya kutenderera pasirese wakadonha neakasimba uye kusimba, Naturgy yaive imwe yenzvimbo diki dzekuchengetedzwa dzakakoshesa zvakanyanya pakati peakanyorwa Spanish sarudzo, nekukwira kweanopfuura 1%. Icho chikonzero chinofanirwa kuwanikwa mukuti chakaisa mari makumi maviri nemakumi mashanu emamiriyoni mu tenga zvikamu 904.207 zvemari. Chiitiko chinosuwa chikamu chakakura chevashambadzi vadiki nepakati nepakati kana ma equities ari munyowani yakadzika yekudzika.
Kunyanya, mukati mechimiro chechirongwa chayo chekudzosa zviito zvako yekambani, Naturgy yakawana 249.716 yemasheya ayo muna Zvita 18 pamutengo wepakati wema22,79 euros uye imwe 173.118 pamutengo wepakati wema22,94 euros musi wa19 wemwedzi uno. Zvimwechetezvo, kambani yakadzikinura zvikamu makumi maviri nezvitanhatu nemakumi matatu nezvitatu zvikamu zvakapfuura China, Zvita 216.373, pamutengo wepakati wemaeuros e20 mugove uye zvikamu mazana maviri nemakumi maviri nezvitanhatu zvezvikamu zvayo pamutengo wepakati wema22,75 euros kupera vhiki.
Kuburikidza neichi chiito, yenyika simba kambani yafunga kuwedzera iyo huwandu hwekutora yezvake zvikamu, kubvira pakati paZvita 7 na14, kambani yesimba yakanga yatenga zvikamu zvishanu nemazana mashanu nemakumi mashanu neshanu pamutengo wepakati pakati pe525.651 ne22,14 euros pamugove. Zvinoshamisira kana iyi kambani iri imwe yemakambani anoita zvakanaka mugore rapfuura rekutengesa. Pamwe pamwe nemamwe makambani emagetsi akanyorwa pamusika wemasheya, senge Iberdrola kana Endesa. Saka, saka, musangano wakakwevera kutarisisa kune vamiririri vezvemari nevapindiri.
1 Tenga zvakare: mitengo yakachipa
2 Psychological mhedzisiro yekushanda uku
3 Zvakanakira kufamba uku kwekuverenga
4 Maitiro anoshandiswa
5 Mhedzisiro inogadzirwa neiyi kufamba
6 Inokodzera vatengesi here?
Tenga zvakare: mitengo yakachipa
Chimwe chezvinangwa zvekugovana chikamu ndechekuti zvinoitwa kugadzira uye wedzera wega portfolio pasi pemitengo yemakwikwi zvakanyanya kupfuura nakare kose. Kubva pane ino yakajairika mamiriro, inowanzo kuve tsika inoshandiswa nemakambani akanyorwa kazhinji kana zvishoma. Nechinangwa chekuwedzera chikwereti chayo, kazhinji pamutengo uri nani pane masheya emakambani akanyorwa akambove.
Iri zano rinowanzo gadziridzwa kana kukosha kwemitengo yavo kukadzika semhedzisiro ye bassist mumisika yemari. Kana mitengo yavo yawana chirango chakasimba semhedzisiro yezvinhu zvakati zvinozoongororwa mune imwezve yakatarwa chikamu pachikamu ichi chekudyara. Saka kuti iwe uve nazvo zvishoma kujekesa kubva zvino zvichienda mberi, izvi ndizvo zvakaitwa naNaturgy, aimbova Natural Gasi, munguva pfupi yapfuura. Mune mamwe mazwi, yakasimbiswa munzvimbo dzayo uye nenzira yakakura.
Psychological mhedzisiro yekushanda uku
Kudzikinurwa kwemasheya nekambani yakanyorwa pachayo kune mhedzisiro kune vashoma uye vepakati varimi. Ivo vane chivimbo chakakura mukambani kuti kusvika mazuva mashoma apfuura uye muchikamu chakanaka chemaitiro akashandiswa vakasarudza kutora chinzvimbo mune kukosha kana kungoti iyo kuwedzera zvakaenzana. Sezvo ivo vachisimbisa kuti kambani ine yakawanda yekutenda mune mukana weayo mutsara webhizinesi, ivo vanofunga kuti zviri nani kudzokorora mafambiro aya, mune kumwe kusimba kana imwe.
Kazhinji, aya marudzi emabasa anoitwa mukati nepakati uye kwenguva refu. Kunyangwe pasina kushomeka kwekufungidzira mafambiro ane chinangwa chikuru kuita kuti kuchengetedza kubatsire munguva ipfupi inogoneka. Kunyangwe chinhu chakakosha kudiwa kujoina iyi yakasarudzika zano mumisika yequity iri uve nemari inodiwa yekutora mashandiro aya pamusika wemasheya. Havasi vese vashoma uye vepakati varimari vari mune ino mamiriro, sezvo iwe pachako uchazoziva kuburikidza nerako pachako ruzivo mune urwu rudzi rwekufamba mune yekugovana.
Zvakanakira kufamba uku kwekuverenga
Iyi inguva yakakodzera yekuburitsa pachena kuti ndeapi mabhenefiti akakosha ekugadzira kufamba uku mumusika. Huye, iyo share buyback ndiyo imwe yenzira iyo iyo kambani inogona kudzosera kune avo vagovana navo. Muzviitiko zvakawanda kuburikidza nekuparadzirwa kwe zvikamu pakati pevashandi vayo. Kune rimwe divi, zvinofanirwa kucherechedzwa kuti oparesheni iyi yekuverenga inogona kuratidza kuti pakupedzisira kune mamaneja nevashambadzi vakuru vanoratidza kuvimba kwavo mukambani. Uye nekudaro, nzira yakanakisa yekuzviratidza ndeyekutenga masheya. Izvo, shure kwezvose, meseji yekuvimba iyo yavanopa kune vanoita mari.
Kune rimwe divi, ine imwezve yekutevera mhedzisiro pakati pevashoma nepakati varimi. Kuti pakupedzisira vanotevedzera kana kudzokorora zviito izvi ne kuvimba kuti mutengo wemari uchakwira, zvirinani mune yepakati nepakati yakareba. Kunyangwe ichi chiitiko hachifanirwe kunge chichifanira kuzadzikiswa, icho chingave chinodikanwa kwazvo kune chikamu chikuru chevamiriri vemari. Kunze kwekumwe kufunga kwehunyanzvi uye pamwe zvakare kubva pakuona kwezvakakosha.
Maitiro asina kuomarara anoshandiswa nevashambadzi vadiki nepakati ndeyokusarudza mabhegi akagadzirwa nemakambani akanyorwa ku monetize mari yako nenzira yakachengeteka uye inoshanda. Hazvishamise kuti idzi dhata dzinoitwa pachena mune makuru midhiya akasarudzika mumisika yequity. Kubva pane ino yakajairika mamiriro, iko kuvhiya kunobatsira kwazvo kuita kana mazwi ekugara kusvika makore mazhinji aonekwa.
Kune rimwe divi, kutengwa kwemasheya kunofanirwa kuitiswa kana mutengo wezvikamu wasvika pazasi payo panguva yekudzikira zvakanyanya. Ndiyo nguva chaiyo yekutora nzvimbo nyowani muukoshi kubva kubva pamatanho iwo iyo purofiti inogona yakakwira zvakanyanya kupfuura nakare. Kunze kwekumwe kufunga kwehunyanzvi uye pamwe kunyangwe kubva pakuona kwezvakakosha. Iri izano rinoshandiswa nemamwe emakambani akanyorwa muzvikamu.
Mhedzisiro inogadzirwa neiyi kufamba
Kudzikinurwa kwezvikamu mukati mako hakuna kunaka kana kushata, asi zvinopesana, zvinoenderana nekushanduka kwayo mumisika yemari kubva panguva iyoyo zvichienda mberi. Asi mune chero mamiriro ezvinhu ine mhedzisiro iyo yakajairika kune ino kirasi yekushanda uye iyo yakavakirwa pane inotevera mipiro yatichazokufumura iwe pazasi.
Inowedzera iyo uremu mukati mevashandi yekambani yakanyorwa, pamatanho anoenderana nekutenga kwakaitwa panguva iyoyo.
Kana zvese zvikaitika nemazvo iyo chikamu chebatsiro ichave yakakura kwazvo mumakore mashoma anotevera. Chinhu icho kune rimwe divi chinowedzera kana iyo kambani ikagovera zvikamu pakati pevashandi vayo. Kuwedzera, saka, kukoshesa kune zvikamu uye nenzira yekujekesa.
Iko kufamba kunoitirwa nguva refu yekugara uye kwete saka kumafambiro ehunhu hwekufungidzira kana nepfungwa yekubvisa zvigaro mumwedzi mishoma kana kunyangwe makore. Chido chekugara ndeimwe yemadinominesheni avo akajairika uye ayo avanoziva rudzi urwu rwekutenga mumisika yemari.
Iri zano rinoshanda uye rakavimbika kana rakagadzirwa mumakambani e yepakati uye hombe cap. Kunyanya, kuti vane kugadzikana kukuru mumabhizinesi avo mitsara. Semuenzaniso, mabhangi, makambani emagetsi, makambani emafuta kana makambani einishuwarenzi.
Inokodzera vatengesi here?
Chero zvazvingaitika, mumwe wemibvunzo yakamutswa nesangano iri mumusika wemasheya ndeyekuti zvinobatsira here zvido zvevashambadzi vadiki nepakati. Uye kunyanya kana vachifanira kutora zano rekudyara iri. Zvakanaka, mune ino kesi iko kuvhiya izvo inotakura dzimwe njodzi nekuti ivo vanogona kukanganisa iwo huwandu hwemvura inoratidzwa nemaakaundi emushandisi. Nekuwedzera kwekufanirwa kutengesa zvikamu kana zvikasachinja zvakanaka mumwedzi inotevera kana makore. Nezve mukana wekutengesa unofanirwa kuitwa kure kwazvo kubva kumutengo wekutenga.
Nechikonzero ichi, chenjedzo chaiyo inofanirwa kutorwa kuita iko kuita. Kunze kwekunge iwe uine yakajeka kudanwa kwekugara zvachose uye mune iyo kesi inogona kuve yakajeka bhizinesi mukana. Iko kunowana mhedzisiro inoratidzwa mune yepakati nepakati yakareba. Naizvozvo, zvichave zvakafanira kunyatsojekesa nezve zvinangwa zvinoteedzerwa mukudyara. Mune mamwe mazwi, haugone kutenga kumashure masheya saizvozvo. Kana zvisiri, pane kudaro, panofanirwa kuve nechisimba majeure ekuita kufamba uku mumisika yemari.
Hazvishamise kuti zvinofanirwa kutariswa kuti zvinopesana uye zvisingadiwe zvinogona kuitika uye kuti hapana chimwe kunze kwemutengo wekambani kudzikira, kunyangwe pamatanho asingafungidzirwe neakanyanya mamiriro evatengesi vevatengesi. Ndiyo njodzi huru inobvumidzwa nekutenga kutsva uku.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ehupfumi Zvemari » Zvigadzirwa zvemari » Goverana zvekutenga: nei vachiita miviri?
Yenguva refu-dhipoziti: vakaita sei?
IPC: chii icho uye inokanganisa sei kudyara?